မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဘလောဂါနေ့ တို့မမေ့
Posted by mabaydar at 8:36 PM
ဟင့်...ပျော်ကြပါ..ပျော်ကြပါ..။ ပျော်နိုင်သူတွေ ဆိုတော့လည်း ပျောက်ကြပေါ့ ... :(
ဟဲ...ဟဲ..။ အလကားစတာ ပျော်စရာကြီးဟာ။ အခုလို တစ်စည်းတစ်လုံးထဲ မောင်နှမတွေ စုစုဝေးဝေးတွေ့ရတာ တကယ်ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်..။ အားကျဖို့လည်း ကောင်းတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ကြပါစေဗျား....။
10/05/2008 7:47 AM
OT ရှိလို့ မလာလိုက်ရပေမယ့် မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုကိုတော့ လာကြည့်သွားပါတယ်။ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ပျော်သွားပါတယ် မဗေဒါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
both of video and charming expression of this post.
10/05/2008 3:18 PM
ကြည့်လို့တောင် မဝနိုင်ဘူး မဗေဒါရေ..Tanq
10/05/2008 7:45 PM
စောင့်နေတာ ကြည့်ချင်လို့။ အခုတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ ပျော်စရာကြီးနော်။ နောက်နှစ်တွေလည်း ဒီထက်မက လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ပျော်စရာကြီးပါပဲ..မဗေဒါရေ.. :)
10/05/2008 9:40 PM
MBS မှတ်တမ်းလေးကို ခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.. မဗေဒါကြိုး2စား2 နဲ့လုပ်ထားတာလေးကို ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်
မဗေဒါ အားစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး အဲဒီနေ့လေးကို တမ်းတမ်းတတ ပြန်သတိရမိတယ်။ သွန်းသွန်းပြောသလိုပဲ ကြည့်လို့တောင် မဝပါဘူးဗျာ။ အဲဒီနေ့ကမှ စတွေ့ကြပေမယ့် သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ ရင်းနှီးသွားတာ Blog တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်များမှာလည်း အခုလို စုံစုံညီညီ ပျော်ပျော်ပါးပါး ထပ်တွေ့ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အခုလို အပင်ပန်းခံပြီး editအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မဗေဒါကို ဘယ်လိုမှ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ပထမပိုင်း ၈မိနစ်စာလောက်နဲ့ ဒုတိယပိုင်း ၅မိနစ်စာလောက် ထွက်လာအောင် ဘယ်လောက် ပင်ပန်းခဲ့သလဲဆိုတာ လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပဲ သိမှာပါ။ မောင်ပွတ်နဲ့ သွန်းသွန်းပြောသလိုပါပဲ။ ကြည့်မ၀အောင်ကို ဖြစ်ရပါတယ်။ ကဲ မဗေဒါရေ . . . ကျေးဇူးတင်ပါ . . . .တယ်. :)
10/06/2008 2:33 AM
မကြီးရေ အလုပ်နဲနဲများနေသောကြောင့် အလည်လာနောက်ကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာ.. တောင်းပန်ပါတယ်နော့် :) ဘလော့ဒေး ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်သွားပါတယ် နောက်တခါ ပြန်ဆုံနိုင်အောင်လို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်
ကော်ကော်မကောင်းလို့ ဒေါင်းဒေါင်းပဲ ဆွဲသွားလိုက်တယ်
thank you for ur hardwork :)
btw..plz sms to me ur num aft tomorrow..i lost my handphone yesterday..
ရုပ်ရှုင်များလားလို. ကောင်းလိုက်တာ။ အစအဆုံးကြည်.သွားတယ်။ ဆွဲဆောင်မှူရှိတယ်။
နားကွင်းနဲ့အကျီင်္အဖြနဲ့ က မဗေဒါလားး
မျှော်နေတာခုမှဘဲကြည့်ရတော့တယ်၊ ခုလိုလက်စွမ်းပြထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ပြန်ပြောင်းသတိရမိပါသေးတယ်။
10/22/2008 10:06 PM